आज कुन कुन ठाउँमा भारी वर्षा हुन्छ ? – Palika Times
आज कुन कुन ठाउँमा भारी वर्षा हुन्छ ?
३१ जेठ, काठमाडौं ।मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले आज देशका प्रदेश नं १, प्रदेश नं २, गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानहरुमा भारी बर्षाको समेत सम्भावना भएकाले आवश्यक सतर्कता अपनाउन अनुरोध गरेको छ ।
यसैगरी, सोमबार दिउँसो देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रहने र देशका धेरै स्थानहरुमा मेघगर्जन, चट्याङसहित हल्का देखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ।
भने, प्रदेश नं १, प्रदेश नं २, गण्डकी प्रदेश तथा लुम्बिनी प्रदेशका एक,दुई स्थानहरुमा भारी बर्षाको समेत सम्भावना छ ।
ज्ञानेन्द्र शाहीको टोलीले मापसे गरेको प्रमाणित, गल्ती स्वीकार्दै मिलापत्र